Ogaden News Agency (ONA) – Daawo -TV’ga ESAT oo soo saaray Barnaamij uu kaga hadlayo Xasuuqa ka socda Ogaden
Daawo -TV’ga ESAT oo soo saaray Barnaamij uu kaga hadlayo Xasuuqa ka socda Ogaden
Posted by ONA Admin	/ September 17, 2014
TV-ga ESAT ee mucaaradka Ethiopia ayaa soo saaray barnaamij uu kasoo diyaariyay xasuuqa ka socda Ogaden. Hoos ka daawo linkiga…
TV’ga ESAT waxa uu soo qaatay Xasuuqyo ka dhacay gudaha Ogadeniya oo muu qaalo leh, kuwaas oo ay sheegeen in ay ka heleen ciidamo Ethiopian ah oo duubay dad fara badan oo meyd ah oo si wadareed loo laayay.
Sidoo kale waxa ay soo qaateen filimaan ay soo diyaarisay Haayada Cilmibaadhista Ogaden kuwaas oo lagu waretystay dhibanayaal ku sugan xeryaha qaxootiga Kenya, dhibanayaasha ayaa ka waramay dhaawacyadii soo gaadhay iyo xasuuqa loo geystay ehelkooda markii ay joogeen gudaha Ogaden.
Barnaamijkan waxa kale oo uu ka waramayaa Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogaden markii ay kamdika aheyd nidaamkii ku meel gaadhka ahaa ee 90meeyadii, waqtigaas oo Jabhada ONLF ka talinaysay dhulka somalida Ogaden, muddo yar oo kooban kadibna waxaa lagu qasbay in jabhadu duurka gasho kadib markii taliska Tigreegu uu hagardaamooyin u geystay shacabka Somalida Ogaden. Barnaamijkan waxa uu ka waramayaa dagaalada dhex mara Ciidamada ONLF iyo sida fuleynimada leh ee Ciidanka Ethiopia uga aar goostaan shacabka aan isdifaaci karin ee somalida Ogaden, markasta oo lagu soo jabiyo dagaalada ay la galaan Ciidanka ONLF.
Barnaamijkan waxa kale oo uu ka waramaya Haayadaha Xuquuql insaanka warbixinihii ay kasoo saaren dhulka Ogaden iyo jawaabihii ay bixiyeen taliska woyanuhu ay isku dayayeen inay ku beeniyaan haayadaha xuquuql insaanka iyo kuwa samafalka iyo wargeysyada caalamka kuwaas oo ay ku tilmaameen inay dhamaantood u shaqeeyaan Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogaden.
Hadaba filimka oo dhameystiran waxaad ka daawataan Muuqaalkan hoose.